के हो बुल्दी खोला पुल उद्घाटनको वास्तविकता ? : RajdhaniDaily.com -
Home बिचार के हो बुल्दी खोला पुल उद्घाटनको वास्तविकता ?
By प्रतापलाल श्रेष्ठ
चर्चामा तनहुँ: प्रधानमन्त्रीमाथि निरर्थक आरोप
आजका दिनहरूमा पनि तनहुँको बुल्दी खोलाको पुल उद्घाटनको कार्यक्रमको घटना सेलाइरहेको छैन । कुनै न कुनै रूपमा चर्चामा रहेको छ । प्रधानमन्त्रीले मंसिर २३ गते बालुवाटरमा आयोजना गर्नुभएको सर्वदलीय बैठकमा पनि रामचन्द्र पौडेलले उठाएर गुनोसो गर्नुभयो । केही पत्रिकामा दिइएको अन्तर्वार्तामा पनि खुलेर यो घटना बताउनुभएको छ । यो घटना घट्नुमा प्रधानमन्त्रीको हात रहेको भनी प्रधानमन्त्रीलाई गम्भीर आरोप लगाउनुभयो । आफू लोकतन्त्रका लागि जेल बसेको तर प्रधानमन्त्री केपी ओली ज्यान मारेर हत्याकाण्डको आरोपमा जेल बसेको सम्म पनि भन्न भ्याउनुभयो । मोहनचन्द्र अधिकारी, केपी ओली, राधाकृष्ण मैनालीहरू नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको उच्चस्तरको राजबन्दी भएको कुरा भुतुक्क बिर्सनुभयो । नेपाली कंग्रेसका बन्दीहरू कप्तान यज्ञबहादुर थापा र भीमनारायण श्रेष्ठलाई नख्खु जेलबाट निकालेर गोली हानेर मारेपछि जेलमा कुनै कंग्रेस कार्यकर्ता थिएनन् । परिवर्तनका लागि राजसंस्था अन्त्यका लागि झन्डै २० वर्ष देशको विभिन्न जेलहरूमा कम्युनिस्ट नेता कार्यकर्ताहरू मात्र रहे । २०४२ सालमा भने जनवादी मोर्चा (रामराजा सिंह)का कार्यकर्ताहरू थपिए । त्यसबेलाको राजाले नेतृत्व गरेको पञ्चायती सरकार केवल कम्युनिस्टहरूलाई मात्र दबाउन लाग्यो । तर जनताको साथ पाएको कम्युनिस्ट पाटीहरूको विकास र प्रगति पञ्चायतको कुनै हथकण्डाले रोकिएन । त्याग र बलीदानको अनुपम इतिहासहरू कोर्दै गए कम्युनिस्टहरूले ।
चर्चामा रामचन्द्र पौडेल र निर्वाचन
बुल्दीखोला पुल उद्घाटन कार्यक्रमले नेपाली कंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पनि निकै चर्चामा हुनुहुन्छ । उहाँमाथि सद्भाव सदाशयता र माया पनि थपिएको छ । पूर्वसभामुख, भूपू उपप्रधानमन्त्री, कांग्रेसको वरिष्ठ नेताले एउटा मामुली रकमको पुल उद्घाटनमा अवरोध पु¥याउनु सरकार र नेपाली कम्युनिस्टको कार्यकर्ताहरूले रोक्नु वा विरोध गर्नुहुने थिएन । अझ निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर रोक्न खोज्नु सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग हो । आज रामचन्द्र पौडेलको प्रमुख आतिथ्यतामा हुने कार्यक्रममा विरोध हुन्छ भने भोलि के होला भन्दै कार्यकर्ताहरूलाई आन्दोलनमा उतार्न कोसिस गरिएको छ । त्यसो हो भने यो घटनाको वास्तविकता के हो ? यो पस्कने कोसिस गरिएको छ ।
२०४६-४७ सालको सफल आन्दोलनपछि भएको निर्वाचनहरूमा रामचन्द्र पौडललाई सधैं सफलता हात लाग्यो । उहाँले विरोधीलाई निकै पछाडि पारेर विजय हुनुहुन्थ्यो । २०४८ सालको निर्वाचनपछि कांग्रेस पार्टीमा उहाँको उम्मेदवारीलाई लिएर पाटीभित्र विरोध र बागी उम्मेदवार नभएको होइन । तर पनि उहाँले उम्मेदवारी पाउने कुरा र विजय हुने कुरा गाह्रो विषय बनेन ।
तर, यसपालिको निर्वाचनमा भने रामचन्द्रलाई भने त्यस्तो सफलता हात लागेन । लाग्ने सम्भावना नै थिएन । नेकपा एमालेको सूर्यध्वजावाहक संयुक्त बाम उम्मेदवारबाट पछारिनुभयो । त्यो पनि धेरै मतले । चुनावका बेला कांग्रेस पार्टीको सरकार भएको बेला भए पनि कार्यकर्ता हरेक मोर्चामा निडरका साथ डटे चुनावको परिणाम आफ्नो हातमा पारे ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा उहाँले पराजय हुने निश्चित थियो । पहिलो नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धन थियो । एउटै वाम उम्मेदवार थियो । कम्युनिस्टहरू निकै उत्साहित थिए । कांग्रेस पार्टीबाट पीडित कार्यकर्ताहरू जसरी पनि जित्ने र विवाद वा मतभेदहरू केही छन् भने कही पोख्न नपाइने भन्ने कुरामा नेतृत्वले कडाइ गरेको थियो, दोस्रो नेकपा एमालेले विगतका निर्वाचनहरूमा पराजित हुँदा पनि थोरै थोरै मतले पराजित भएको थियो । सधैं दुई कम्युनिस्ट पार्टीका दुई नेताहरू मैदानमा देखिन्थे तर अहिले यस्तो अवस्था थिएन ।
आज रामचन्द्र पौडेलको प्रमुख आतिथ्यतामा हुने कार्यक्रममा विरोध हुन्छ भने भोलि के होला भन्दै कार्यकर्तालाई आन्दोलनमा उतार्न कोसिस गरिएको छ
दोस्रो, नेपाली कंग्रेसमा निकै प्रभाव राख्नुहुने पूर्वसहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशी उहाँसँग निकै असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो र उहाँले बागी उम्मेदवार पनि हाल्नुभएको थियो । रामचन्द्र पौडेललै दिनुभएको निवेदनका आधारमा निर्वाचन आयोगलाई प्रभावपारी गोविन्दराज जोशीको उम्मेदवारी खारेज गरिएको थियो । जब कि मुद्दा किनारा लागेको थिएन । विचाराधीन थियो । यो घटनापछि गोविन्दराज जोशीले पोजिसन लिनु स्वाभाविक थियो ।
विकासमा कम्युनिस्ट सरकार
यो घटनाको समस्या कहाँ रहेको थियो भने पराजित भएको नेपाली कांग्रेस जसरी आफ्नो ठाउँमा रहनुपर्ने थियो रहन सकेन । हारेपछि पनि तनहुँ जिल्ला त हाम्रै हो अन्त अर्काे कुरा अरू जिल्लामा हाम्रो सरोकार छैन तर यहाँ त हामीले नै भनेको हुनुपर्छ । यस्तो कुरा ६ मा ६ सिट जितेको कम्युनिस्टहरूलाई पच्ने कुरा भएन । हिजो हामी पराजित भएका थियौं । यस्तो कुरा खोज्दै हिडेनौं । सहेरै बस्यौं तर अहिले पनि सहनुपर्छ भन्ने केही छैन र सहन पनि सक्दैनौं । रामचन्द्र पौडेलले तनहुँमा जे विकास भएको छ । त्यो सबै मैले गरेको हो जे हुन बाँकी छ, त्यो पनि सवै मैले गर्छु भन्दै हिँड्नुहुन्छ । यस्ता कुरा कोही सुन्न तयार छैन । लमजुङ तनहुँको सीमा बनेर बगेको रिस्ती खोलामा जहाँ रामचन्द्र पौडेलको जन्मस्थान हो । यही मंसिर १९ गते एक कार्यक्रमका बीच ४ करोड ४७ लाखमा रिस्ती खोला पुलको शिलान्यास माननीय सदस्य रामबहादुरले गर्नुभयो । केही पहिले मात्र त्यही खोलाको सोतीबेसी र स्वोतीपसल जोड्ने करिब यति नै रकमको पुल माननीय मन्त्री रामशरण बस्नेतले शिलान्यास गर्नुभयो । यसै वर्ष त्यस ठाउँमा पुलैमा मात्र करिब ९ करोड बिच्छाएको छ गण्डकी प्रदेशले ।
कार्यक्रममा जनताले भने के गर्नु हाम्रो मानिसले मौका पाउँदा पनि गर्नुभएन । अहिले धमाधम कम्युनिस्टहरूले गर्दै छन् । धेरै भएको छैन तल शिलान्यास गरेको अहिले यहाँ । यो त्यहाँको जनताद्वारा रामचन्द्र पौडेललाई नै भनिएको थियो । अझ जनताले भनेका थिए ‘कम्युनिस्ट सरकारले वास्तवमा धेरै गरेको छ है । गाउँमा आएर हेर्नुपर्छ, बजेट कसरी छरिएको छ ।’
लोकतन्त्रवादी नेता, सीमा र विवाद
रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रियस्तरको लोकतन्त्रवादी नेता हुन्, यसमा विवाद छैन । कांग्रेस पार्टीको वरिष्ठ नेता हुन्, यसमा पनि विवाद भएन । तर, आआफ्नो ठाउँमा बस्नुपर्छ, जे सीमा तोकिएको छ, त्यो सीमामा बस्नुपर्छ । संविधान कानुन अरूलाई जस्तै उहाँलाई पनि लागू हुनुपर्छ । उहाँ संविधान र कानुनभन्दा माथि हुनुहुन्न । चुनावमा विजयी हुँदा निकै माथि पुग्नुभयो, मानसम्मान पाउनुभयो, ठूलो शक्तिको अभ्यास गर्नुभयो तर अहिले त हार्नुभयो नि । हुन सक्छ, उहाँ जस्तो नेता अहिले पनि जित्नुपर्दथ्यो होला, उहाँजस्तो संसदीय अनुभव भएको व्यक्ति संसद्मा खोजी भयो होला तर के गर्नु ? हार्नुभयो ।
गत मंसिर १६ गते प्रशासनले नगर्नेभन्दा भन्दै निर्माण सम्पन्न सुँढेको मोटरेबल पुल उद्घाटन गरी छाडनुभयो । सरकार प्रशासनको आदेश मान्नुभएन । त्यो केन्द्रको बजेटले बनाएको थियो । संघको सरकार आयोजक हुनुपर्दथ्यो । व्यास नगरपालिकाको के योगदान छ ? व्यास र रिसिंगले कुनै रकम छुट्याएको छैन । शिलान्यास गर्दा केन्द्रले गरेको थियो । तीन तहको सरकारमध्ये जुनले बनाएको छ त्यसैले आयोजक बनी गर्नुपर्ने कार्यक्रम थियो । तर बेसरोकार संस्था वा मानिस आयोजक बनेर ग¥यो । कहीँकतै समन्वय गरेन यस्तो बारे बोल्नु पर्दैन र ? उहाँ जस्तो व्यक्तिले सुंढेको मोटेरेबल पुल उद्घाटन गर्दा सरकार, प्रशासन र कम्युनिस्ट पार्टी विरुद्ध तँ तँ र म म भनी राख्नु भएको मन्तव्यले केही कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूलाई निकै मज्जा लागेको भए पनि केही कांग्रेस कार्यकर्तालाई भने लाजले शिर निहुरेको थियो ।
बुल्दी खोलाको पुल पनि उद्घाटन र मन्त्रीको विज्ञप्ति
रामचन्द्र पौडेलको मन्तव्यले चिढिएका कार्यकर्ताहरूले मंसिर १७ गते बुल्दीखोलाको पुल पनि उद्घाटन हुँदै छ भन्ने खबरले उत्तेजित हुनु स्वाभाविक थियो । प्रदेश सरकारको आयोजनामा हुनुपर्ने थियो । त्यसैले राष्ट्रिय युवा संघको एक जुलुुसले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ पनि ग¥यो । नाराबाजी ग¥यो । घेराउकै क्रममा राष्ट्रिय युवा संघका जिल्ला संयोजक ईश्वर बस्याल, सहसंयोजक भगवान श्रेष्ठ र अन्य युवा नेताहरू ज्ञानेन्द्र बसौला, सूर्यबहादुर केसी र बादल आलेहरूलाई गिरफ्तार गरियो । यस घटनााले युवाहरू झन् उत्तेजित भएका थिए । प्रशासनले यस्तो नगर्नुपर्ने थियो । छोडिदिनुस् भन्दा भन्दै पनि आज दिनभरि छोड्न सकिँदैन स्थिति नियन्त्रणमा आएपछि भन्ने जवाफ आयो । नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूको रिहाइपछि राति मात्र छोडियो ।
आन्दोलन वा अन्य बेलाको गिरफ्तारीले पौडेलको मान बढ्थ्यो होला तर यसपालिको गिरफतारीले उहाँको मान बढेको छैन
पौडेलको उद्घाटन गरी छाड्ने प्रयास
यसरी विकास भएका घटनाहरूलाई नेपाली कांग्रेसले देखेको नदेखै सुनेको नसुनै ग¥यो । मूलतः रामचन्द्र पौडेलकै विशेष चाहनामा बुल्दीखोला पुल उद्घाटन गर्नै लाग्नुभयो । मन्त्रालयबाट नगर्नु÷नगराउनु आदेश आएपछि स्थगित गर्नु भनेर दिएको जानकारीको वास्तै गरिएन । जसरी पनि गरी छाड्ने धुनमा रहनुभयो । यो कार्यक्रम रोकिने छाँटकाँट नदेखिएपछि प्रशासनले माथिको आदेशबाट सम्भावित दुर्घटनालाई रोक्न निषेधाज्ञ जारी ग¥यो तर पनि रामचन्द्र पौडेल रोकिनुभएन । यसलाई ठूलो प्रतिष्ठाको विषय बनाउनुभयो । जसरी पनि उद्घाटन गर्न लाग्नुभयो । प्रशासनको अगाडि सम्भावित दुर्घटना रोक्न र उद्घाटन रोक्न पनि चुनौतीको विषय बन्यो ।
विगतका केही तीता घटनाहरूको सम्झना
यहाँका मानिसहरूलाई थाहा छ । २०५४ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जिल्लाभरिमा नेपाली कांग्रेस नराम्रो गरी पराजित भए पनि व्यास नगरपालिकामा भने १२०३ मतले नेपाली कंग्रेसले विजयी पाएको थियो । २०५४ साल जेठ ४ गते विजय जुलुस बजार परिक्रमा गरी सभामा परिणत नभई सिधै जिल्ला प्रशासन छि¥यो । तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी माथि नेपाली कंग्रेसका नेताहरूको उपस्थितिमा जथाभावि गरियो र जिल्लामा रहने अवस्था नै बनेन र उहाँले जिल्ला छाडनुप¥यो । यस्तो घटनाहरू दोहोरिरह्यो । २०५४ साल भाद्र १० गते शिक्षकहरू सरुवा गरेको निहुँ पारी जिल्ला शिक्षा कार्यालय घेराउ गरियो । पुरै हुलभित्र पसेर जिल्ला शिक्षा अधिकारीमाथि अपमान गरियो । त्यसबेला सुरक्षामा रहनु भएका इन्सपेक्टर रत्नप्रसाद नेपालको टाउकोमा गम्भीर चोट लाग्यो र घाइते हुनु भयो । यो घटना पछि उहाँहरू दुवै यस जिल्लाबाट सरुवा भएर जानुभयो ।
पौडेलको अड्डी र गिरफ्तारी
त्यसो हुँदा अहिलेको आदेश नेपाली कांग्रेसको विरुद्ध हुने हँुदा प्रशासन सचेत थियो र सचेतनताका उपायहरू अपनाएको थियो । समय, अवस्था, जनमत, जनतामा आएको परिवर्तनका कारणले नेपाली कांग्रेसले संयम अपनाउँछ भन्ने ठानिएको थियो । त्यस्तो भएन जुनसुकै हालतमा उद्घाटन गर्ने अड्डी लियो । उद्घाटन गर्न कसले रोक्दो रहेछ भनी रामचन्द्र पौडेल दलबलसहित जानुभयो । सुरक्षा घेरा तोड्न कोसिस गर्नुभयो । स्थिति असमान्य हुन थालेपछि सुरक्षामा रहेका पुलिसहरूले उहाँलाई सम्मानका साथ पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ल्यायो र करिब ३ घण्टा राखियो र सम्मानमका साथ छोडियो । आज त उद्घाटन हुन सकेन ।
उद्घाटन र प्रशासनको संयमता
रामचन्द्र पौडेल जुनसुकै हालतमा उद्घाटन गरी छाड्ने अडान कायम रह्यो । यस गण्डकी प्रदेशभरिका जिल्लाहरू र काठमाडांै र चितवनबाट पनि कार्यकर्ताहरू झिकाइए । यो अवस्थालाई देखेर प्रशासनले संयम अपनायो । यही घटनाले कुनै दुर्घटना हुनुभन्दा थोरै पछि हट्नु राम्रो हुने भएकाले पछाडि हट्यो, जब रामचन्द पौडेल जसरी पनि उद्घाटन गर्न खोज्नुहुन्छ भने उद्घाटन गरी छाडियो ।
पर्दाभित्रका केही प्रश्न
अहिलेको यो विषय सर्वत्र चर्चाको विषय भए पनि रामचन्द्र पौडेल चर्चित भइरहनुभए पनि पर्दाभित्र केही प्रश्नहरू छन् । त्यो पनि उल्लेख गर्नु राम्रो हुनेछ । नियम कानुन सबैका लागि बराबरी हँुदारहेछ । कसलाई के ? कसलाई के ? हुँदोरहेनछ । ठूलो भए पनि, सानो भए पनि, नेता भए पनि कार्यकर्ता वा जनता भए पनि, मन्त्री भए पनि वा कुनै लाभको पदमा नभए पनि नियम, कानुन आदेश लाग्दो रहेछ । अहिलेको यो प्रशासन तनहुँले देखायो । सत्ताधारीका कार्यकर्तालाई पनि बाँकी राखेन । प्रहरी प्रशासनको प्रयोग प्रतिपक्षलाई मात्र होइन, सत्ताधारीमाथि पनि प्रयोग भयो । सुनुवाइ प्रतिपक्षको मात्र होइन, सत्ताधारीका नेताहरूको पनि भएन । प्रशासनले कुनै भेदभाव गरेन । झुकेन । यो घटनामा कुनै केही प्रदर्शनकारी पक्राउदेखि बाहेक अंगभंग भएन, कुनै दुर्घटना भएन । कुनै मानविय क्षति भएन । यदि भएको भए सवभन्दा आलोचक तनहुँ प्रशासन र सरकार हुने थियो । दुई पक्षबीच हुने सम्भावित भिडन्त किन ? आँकलन गर्न सकिएन, सम्भावित सुरक्षाका उपायहरू किन अपनाइएन भनी नालायक प्रशासनको रूपमा दर्ज हुने थियो । त्यसबाट मुक्त भयो । आवश्यक प¥यो भने सम्भावित दुर्घटना रोक्न जुनसुकै कदम चाल्न सक्छ भन्ने देखायो ।
कांग्रेस सरकार हुँदाको प्रशासनले यहाँको कम्युनिष्ट कार्यकर्तामाथि बर्बर यातना दिइएको थियो । मदनभण्डारीको दुःखान्त घटनाको आन्दोलनमा होस् वा लाउडा एयर प्रकरणमा होस्, वा हर क्षेत्रमा कांग्रेसीकरणको विरोधको आन्दोलनमा होस् वा महँगी तथा जनताको सरोकारको विषयको आन्दोलनमा होस् धेरै कम्युनिस्ट कार्यकर्ताले दुःख पाएका थिए, गिरफ्तारी र लाठीहरू वर्षेका थिए । यस्तो थाहा पाएका कांग्रेसी कार्यकर्ताहरूले हामी पनि सत्तामा हुँदा सत्ताको शक्ति प्रयोग भएको थियो । जिल्लाको शान्ति अमन चयन गर्ने सरकारको कामै हो नि यस्तो त हुन्छ है भनेर पनि लिएको देखियो ।
रामचन्द्र पौडेल गिरफतार पर्नु साँच्चै चानचुने घटना होइन । २०६२÷६३ को आन्दोलनपछि सायद यो पहिलो घटना होला तर अन्य बेलाको गिरप्mतारीले उहाँको मान बढ्थ्यो होला तर यसपालिको गिरफ्तारीले उहाँको मान बढेको छैन । नियम कानुन र प्रशासानिक आदेश त मान्नुपर्छ भन्ने पनि देखाएको छ । तर पनि यही घटनाको कारण देशव्यापी आन्दोलन गरिएको छ, औचित्य पुष्टि होला ?
(लेखक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्य तथा तनहुँ जिल्लाको सह–इन्चार्ज हुनुहुन्छ ।)
बाजुरामा पहिरोमा परी १ जना बेपत्ता, २ जना घाइते
निमेन्द्र शाही - July 29, 2020 0
बाजुरा । बाजुरा जिल्लाको बुढिगंगा नगरपालिका–१ अम्कोटमा पहिरोमा परी एक जना बेपत्ता भएका छन् भने दुई जना घाइते भएका छन् । बेपत्ता हुनेमा सोही...
प्रदेश ३ प्रशान्त वली - October 4, 2020 0
काठमाडौं । गर्भपतन सेवाले कानुनी मान्यता पाएको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै प्रजनन उमेरका ५८ प्रतिशत महिला सो सेवाबारे अनभिज्ञ रहेको पाइएको छ । ४२ प्रतिशत...
प्रदेश डीबी विष्ट - July 31, 2020 0
बझाङ । क्वारेन्टाईन छाडेर गाँउ फर्किएका २५ जनाको पिसिआर रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ । रिपोर्ट आउने निश्चित नभएको भन्दै एक साता अघि गाँउ छिरेका...
Not-to-be-missed एजेन्सी - August 11, 2020 0